जिमेल एकाउन्ट चोरी हुनबाट बच्ने उपाय – JanaSanchar.com
संबाददाता : ओम हमाल	प्रकाशित मिति: (२०७४ भाद्र १६, शुक्रबार) ०४:०८
नेपालमा धेरै व्यक्तिको जिमेल एकाउन्ट चोरिएको खबर बेला–बेलामा फेसबुक वा ट्वीटरमा लेखिएको हुन्छ । कतिपय अवस्थामा आफूसँगै बसेको व्यक्तिको ईमेलबाट ‘म क्यानडामा पुगेको थिएँ, अहिले समस्यामा परेको छु । कृपया पैसा पठाएर सहयोग गर्नुहोला’ भन्ने ईमेल आउँछ । थाहा पाउनेले सो ईमेल चोरी भएको बुझिहाल्छ । तर, कतिपय अवस्थामा लामो समय भेट नभएको साथीलाई केही समस्या प¥यो भने मद्दत गरौं भन्ने भावना जागिहाल्छ र थाहा नपाउनेले साँच्चिकै पैसा पठाउन पनि बेर लाउँदैनन् ।
यो डिजिटल संसारमा एक से एक ठूला र बुद्धिमान भनाउँदा मान्छेलाई पनि एउटा साधारण ईमेलले वा विज्ञापनले मुर्ख बनाएर उसको एकाउन्ट चोरी गरिदिन्छ र त्यसबाट पैसा झार्न कोसिस गर्छ । उसले पैसा कमाउला वा नकमाउला, तर आफूलाई भने ईमेल हराउँदा धेरै हैरानी हुन्छ ।
हाल विश्वमा जिमेलको ईमेल एकाउन्ट चलाउनेको संख्या ठ्याक्कै एक अर्ब पुगेको छ । भनिरहनु परेन, जिमेल विश्वको सबैभन्दा लोकप्रिय वेबमेल एप हो । यो एप चलाउन सजिलो र कुनै पनि प्रकारको उपकरणबाट (स्मार्ट टिभीबाट पनि) र कुनै पनि ठाउँबाट प्रयोग गर्न सकिन्छ । यो वेबमेल साधारणतया सुरक्षित नै छ, तथापि यसलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी चलाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा यहाँ चार उपाय बताइएको छ ।
पासवर्ड बलियो बनाऔं
यहाँको पासवर्ड के हो ? सोचियो ? राम्रो । अब बदलौं । कस्तो पासवर्ड राख्ने भनेर मनमा प्रश्न आयो ? उत्तर हाजिर छ । पहिलो उपाय, जति लामो पासवर्ड भयो, त्यति राम्रो । राम्रो पासवर्ड भनेको पढ्न मिठो हैन, अक्षर, संख्या र चिन्हसहितको अरुले पढेर पनि सम्झन नसक्ने हुनुपर्छ । चित्त बुझ्छ भने सकभर आफूले मात्र जानेको कुनै भनाइ वा वाक्यको अघिल्लो अक्षर राखेर पासवर्ड बनाउन सकिन्छ । जस्तो, मेरो बुवाले मलाई सधैं बेलुकी एकपल्ट फोन गर्नुहुन्छ भन्ने वाक्यको हरेक शब्दको पहिलो अक्षर ‘एमबीएमएसबीवानफोर’ हुन्छ । यस्तो पासवर्ड गाह्रो भए पनि आफूलाई सम्झन भने गाह्रो हुँदैन ।
सबैथोकको पासवर्ड एउटै कहिल्यै नराख्नू । जिमेलको पासवर्ट ह्याक हुँदा बैकको एकाउन्ट वा फेसबुकसमेत नउडोस् । अब जिमेलको पासवर्ड परिवर्तन गर्ने हो ? आफ्नो जिमेल खोलौं, अप्सनमा, सेटिङमा अनि एकाउन्ट्स तथा इम्पोर्ट । अब पासवर्ड परिवर्तन गर्ने ट्याबमा क्लिक गरेर काम फत्ते गरौं ।
दोहोरो प्रमाणीकरण अपनाऔं
गुगलको दोहोरो वा दुई तहको प्रमाणीकरण अपनाउँदा अरुले खोल्न वा चोर्न नसक्ने सम्भावना हुन्छ । दोस्रो तहको प्रमाणिकरणमा प्रयोगकर्ताको लगइन नम्बर र पासवर्डबाहेक फोनमा भेरिफिकेसन (प्रमाणीकरण) कोड पठाउँछ । त्यो कोड नराखी ईमेल खुल्दैन ।
दाहोरो प्रमाणीकरणमा जाने हो भने एकाउन्ट सेटिङमा गएर ‘युजिङ टु स्टेप भेरिफिकेसन’ खोजौं । यसले एउटामात्र होइन, दोस्रो फोन नम्बर पनि माग्छ, त्यसैले एउटा हरायो भने अर्को मोबाइल वा घरको फोनमा पनि कोड आउन सक्छ । तर, नेपालको ल्यान्डलाइनमा भने म्यासेज आउने सुविधा नभएकोले सकभर दुवै अप्सन मोबाइल नम्बर दिनु बेस हुन्छ ।
एकाउन्ट अप्सन समीक्षा र अपडेट गरौंं
यदि आफ्नो पासवर्ड हरायो वा चोरियो भने रिकभरको विकल्प पनि जिमेलमा छ । हराएको पासवर्ड प्राप्त गर्न वा कसैले लगिसकेको एकाउन्ट फिर्ता पाउन मोबाइल फोन राम्रो विकल्प हुनसक्छ । हुन त अर्को ईमेलबाट एकाउन्ट रिकभर गर्न नसकिने होइन, तर मोबाइल सहज तरिका हो । गुगलका अनुसार यसरी रजिस्टर गरिएको मोबाइल नम्बर उनीहरूले विज्ञापन वा सामान बेच्ने जस्ता कुनै पनि एजेन्टलाई उपलब्ध गराउँदैनन् ।
गुगलमा रिकभरी गर्नका लागि गुगलडटकमको सेटिङ र सेक्युरिटीमा गएर ‘अपडेट रिकभरी अप्सन’मा थिचेर ‘पासवर्ड एन्ड रिकभरी अप्सन्स’ मा फोन र इमेलको सेक्युरिटी अप्सनमा थिचौं ।
अरुले मेरो ईमेल हेर्छन् कि ?
यदि आफ्नो एकाउन्ट अरु कसैले हेरेको शंका छ भने पनि आफैंले पत्ता लगाउन सकिन्छ । जिमेलमा लगइन गरेर सबैभन्दा तल जाऔं । त्यहाँ अन्तिम पटक एकाउन्टको गतिविधि भनेर अंग्रेजीमा लेखिएको हुन्छ । त्यसमा क्लिक गरेर कुन–कुन कम्प्युटरले बाहिर कहाँ–कहाँबाट लगइन गरेर आफ्नो एकाउन्ट प्रयोग गरेको रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ । यदि आफूलाई शंका भएको ठाउँबाट ईमेल हेरेको रहेछ भने अरु कम्प्युटरबाट साइनआउट गर्ने अप्सनमा थिच्ने । त्यसपछि पासवर्ड परिवर्तन गर्ने ।
कहिलेकाहीँ जिमेलले पनि शंकास्पद लगइनको जानकारी दिन्छ । त्यस्तो म्यासेज आएको अवस्थामा पनि माथिकै जस्तो गरेर हेर्ने र पासवर्ड परिवर्तन गर्ने ।
ईमेलको पासवर्ड ह्याक गर्न सधैं अनेक रूपमा अनेक थरीका म्यासेजहरू आइरहेका हुन्छन् । यस्ता म्यासेजमध्ये एकथरीले सधै तिम्रो जिमेल खतरामा छ, पासवर्ड र लगइन कन्फर्म गर भन्छ । यस्तो ईमेल खोलेर यिनले भनेजस्तो गर्नु सबैभन्दा खतरनाक कुरा हो । जिमेलले कहिले पनि पासवर्ड कन्फर्म गर भन्दैन । त्यस्तै कतिपय अवस्थामा कुनै गेम वा चिठ्ठामा सहभागिताको निमन्त्रणा आउँछ । यस्तो वेबसाइटले नयाँ लगइन नाम र पासवर्ड राख्नु भन्छ । यस्तो वेबसाइटमा बिर्सेर पनि जिमेलको पासवर्ड नराख्नू । तिनले सो पासवर्ड हेरेर सहजै चोर्न सक्छन् । त्यसैले यस्तो उपहार वा चिठ्ठाका विषयमा सजग हुनुपर्छ । यहाँको पासवर्डका लागि ह्याकरले अनेक जाल थापेका हुन्छन् । डिजिटल संसारमा सजग बसेन भने सबैथोक सकिँदा पनि आफूलाई केही थाहा हुँदैन ।
(यूएसए टुडेको अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित समाचारको आधारमा)
(२०७४ भाद्र १६, शुक्रबार) ०४:०८ मा प्रकाशित